अमेरिकाले माग्यो नेपाली कामदार, यसरी दिनुहोस् आबेदन? यस्तो छ प्रकिया? – Paluwa Khabar
अषोज ९, २०७८ शनिबार 47
अमेरिकाले कामदार (एचवान बी भिसा) खुल्ला गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०२२ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तोकिएको अवधिभित्र आवेदकले अनलाइन दर्ता गराउनु पर्नेछ । नेपाली समय अनुसार फागुन १८ गते देखि चैत्र ७ गते दिउँसो १२ बजेदेखिसम्म दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ ।
Prevमध्यरातमा प्रकृती नै निष्ठुरी बनेर आयो, अस्ताए एकै घरका कलिला मुनाहरु
Nextमेयरलाई मुक्का हानेर गलत गरे या सहि गरे आफ्नो बिचार लेख्नु होस